Thwebula Playkey 1.2.25.38649 – Vessoft
Imidlalo, Zokuham video
Playkey – a service ifu wokudlala ukudlala imidlalo ethandwa ngokusebenzisa internet. Isofthiwe isekela imidlalo eziningi ezivela abakhiqizi ehola ukuthi waqala kwi kumaseva akude futhi ukusakaza umsebenzisi ngesimo video stream. Playkey kwenza ukudlala imidlalo kunoma iyiphi idivayisi ixhunyiwe ku-internet ngokusebenzisa isiphequluli noma ezinye software amaklayenti. Playkey inikeza ukudluliselwa ngesivinini yamashadi ukusakaza elikhulu izinga image. Isofthiwe lula ukufinyelela imidlalo ehlukene kanye siphuce abasebenzisi kusuka isidingo ukuthenga imishini ekhethekile nokudlala ukuze asekele imidlalo umthwalo enkulu ohlelweni. Futhi ngaphambi kokuthenga imidlalo Playkey ikuvumela ukuba avivinye kubo ngesikhathi esithile period of time.
High ukudluliselwa ijubane Ukusakaza amashadi
Usekela games kusukela abakhiqizi eziholela
Izidingo eliphansi izilungiselelo uhlelo
Ukudlala imidlalo kumadivayisi ezahlukene
Amazwana on Playkey:
Playkey Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Origin 10.3.3.1921
Українська, Français, Español, Deutsch... Bona software xaxa